Tantara: Nisy Voninkazo Nitsimoka Tamin’ny Tehin’i Arona - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Efa nirenireny kelikely tany an’eﬁtra izao ny Israelita. Nieritreritra ny olona sasany fa tsy tokony ho i Mosesy no ho mpitarika, na i Arona no ho mpisoronabe. Anisan’ny nieritreritra toy izany i Kora, ary koa i Datana sy Abirama ary mpitarika 250 teo amin’ny olona. Tonga ireo rehetra ireo nilaza tamin’i Mosesy hoe: ‘Nahoana ianareo no manambony tena amintsika rehetra?’
Hoy i Mosesy tamin’i Kora sy ny mpanaraka azy: ‘Rahampitso maraina dia raiso ny ﬁtondran’afonareo ary asio ditin-kazo manitra ao anatiny. Dia tongava eo amin’ny tabernakelin’i Jehovah. Ho hitantsika izay hoﬁdin’i Jehovah.’
Dia hoy i Mosesy: ‘Izao no hahafantaranareo izay noﬁdin’i Jehovah. Hisokatra ny tany ary hitelina an’ireo lehilahy ratsy fanahy ireo.’
Raha vao tapitra ny tenin’i Mosesy dia nisokatra ny tany. Nilentika tany ambany ny lain’i Kora sy ny fananany, ary koa i Datana sy Abirama ary ireo niaraka taminy, ary dia nikatona teo amin’izy ireo ny tany. Rehefa nandre ny ﬁdradradradran’ireo izay latsaka tany anaty tany ny olona, dia niantsoantso hoe: ‘Mandosira! Mety hitelina antsika koa ny tany!’
Mbola teo akaikin’ny tabernakely ihany i Kora sy ny 250 mpanaraka azy. Koa dia nandatsaka afo i Jehovah, ary may avokoa izy rehetra. Avy eo dia nilazan’i Jehovah i Eleazara, zanakalahin’i Arona, haka ny ﬁtondran’afon’ireo lehilahy maty ary hanao takelaka manify ho an’ny alitara avy amin’izany. Io takelaky ny alitara io dia ho fampitandremana ny Israelita fa tsy misy olona ankoatra an’i Arona sy ny zanany lahy, tokony hiasa amin’ny maha mpisoron’i Jehovah.
Tian’i Jehovah haseho mazava tsara anefa fa i Arona sy ny zanany lahy no noﬁdiny mba ho mpisorona. Koa hoy izy tamin’i Mosesy: ‘Asaivo mitondra ny tehiny avy ny ﬁloha iray isam-poko. Aoka i Arona hitondra ny tehiny ho an’ny fokon’i Levy. Avy eo dia apetaho ao amin’ny tabernakely eo anoloan’ny ﬁaran’ny fanekena ny tsirairay amin’ireo tehina ireo. Ny tehin’ny lehilahy izay noﬁdiko ho mpisorona dia haniry voninkazo.’
Nomery 16:1-49; 17:1-11; 26:10?
Nataon’i Eleazara inona ny ﬁtondran’afon’ireo lehilahy maty, ary nahoana?
Vakio ny Nomery 16:1-49.
Inona no nataon’i Kora sy ireo mpomba azy, ary nahoana izany no ﬁkomiana tamin’i Jehovah? (Nom. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Ohab. 11:2)
Inona no hevi-diso nananan’i Kora sy ireo lehilahy 250 “lohan’ny ﬁangonana”? (Nom. 16:1-3; Ohab. 15:33; Isaia 49:7)
Vakio ny Nomery 17:1-11 sy 26:10.
Inona no dikan’ny ﬁtsimohan’ny tehin’i Arona, ary nahoana izy io no nasain’i Jehovah notehirizina tao amin’ny ﬁaran’ny fanekena? (Nom. 17:5, 8, 10)
Inona no lesona lehibe ianarantsika avy tamin’izay nitranga tamin’ny tehin’i Arona? (Nom. 17:10; Asa. 20:28; Fil. 2:14; Heb. 13:17)